नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : लोकप्रिय हाँस्य कलाकार शिवहरी पौडेलले जब ‘चियासँग चुरोट’ लिएर अगाडि आए !
लोकप्रिय हाँस्य कलाकार शिवहरी पौडेलले जब ‘चियासँग चुरोट’ लिएर अगाडि आए !
नेपालका लोकप्रिय हाँस्य कलाकार, अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँचका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शिवहरी पौडेलको नयाँ गीत ‘चियासँग चुरोट’ स्रोता/दर्शकमाझ आएको छ । शिवहरी पौडेल र समीक्षा अधिकारीको स्वरमा रहेको गीत ‘चियासँग चुरोट’को शब्द सुन्दर पन्त, सङ्गीत वावुल गिरीको रहेको गीतको छ । शिवहरी पौडेलको निर्माण निर्देशन रहेको यो गीतको भिडियोमा विकास फिरोज, मनिषा श्रेष्ठको अभिनय रहेको छ । देवराज सापकोटा/नवराज रिजालको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई नवराज उप्रेतीले छायाँकन गरेका छन् भने मनोज कार्कीले सम्पादन गरेका छन् । नन्दा अधिकारीको मेकअप रहेको छ । ‘हामीले यो गीत मुखमा हान्नुजस्तो युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरेका छौ’, शिवहरी पौडेलले भने । शिवहरी नेपालका तिनै अग्रज कलाकार हुन जो चलचित्र, टेलिभिजनका पर्दा देखी देश बिदेशका स्टेजहरुमा छाउँछन, लोकप्रिय छन र गीत पनि गाउँछन । नेपाल राष्ट्र बैँकको उप निर्देशक पदबाट रिटायर्ड उनी जन जन का प्रिय छन । उनको यो नौलो स्वादको रुपमा रहेको गीत तपाईंलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी !
शिवहरी पौड्याल र अन्य कलाकारहरुका यि प्रस्तुतिले कसलाई बाँकी राख्ला र हँसाउन !
Posted by www.Nepalmother.com at 1:01 PM